यी हुन् अष्ट्रेलियामा श्रीमतीको कुटाइबाट मारिएका नेपाली क्रिकेटर सन्तोष, सीसीटीभीमा यस्तो देखियो ! - Sabal Post
यी हुन् अष्ट्रेलियामा श्रीमतीको कुटाइबाट मारिएका नेपाली क्रिकेटर सन्तोष, सीसीटीभीमा यस्तो देखियो !
काठमान्डौ – अष्ट्रेलियामा श्रीमतीले धा’रिलो हतियार प्रहार गर्दा मृत्यु भएका ३४ बर्षीय नेपाली नेपाली क्रिकेट खेलाडी ३४ बर्षका सन्तोष गौतम रहेको खुलेको छ । उनकी श्रीमती ३४ बर्षकै नु’मा गौतमले धा’रिलो ह’तियार प्र’हार गर्दा सन्तोषको शनिबार राती मृ’त्यु भएको थियो । सन्तोष अष्ट्रेलियाको नेपाली स’मुदायका च’र्चित नेपाली खेलाडी हुन् ।अष्ट्रेलियाको ग्रा’न्सभिलमा भएको उक्त घ’टनाभन्दा केही अ’गाडिको सी’सीटीभी फु’टेज पनि सार्वजनिक भएको छ । उ’क्त फु’टेजमा सन्तोषको जी’वनको अ’न्तिम क्ष’ण कै’द भएको छ ।
उनी हरुकी ८ बर्षकी छोरी समेत छिन् ।’ श्रीमानको ह’त्याको अ’भियोगमा प्रहरीले नु’मालाई नि’यन्त्रणमा लिएको छ । उनलाई पारामाथा बेल कोर्टमा पे’श गरिएकोमा नु’माले ध’रौटीमा रि’हा हुनका लागि अ’नुरोध नगरेको जनाइएको छ । उनलाई प्रहरी हि’राशतमा नै रा’खिएको छ भने विहिबार अदालतमा पेश गरिनेछ ।
हाम्रो युद्धले नेपालमा शान्ति जन्मायो : प्रचण्ड
शुन्य लागतमा नेपाली कामदार पठाइने